Resaky ny mpitsimpona akotry : aza mikipy tatanana jamba | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : aza mikipy tatanana jamba
Adidin’ny vahaoka no miray làlana amin’ireo mpitondra eo amperin’asa, tompon’antoka nohon’ny safidy nataony ny vahoaka, izy no nanematraka ny olona tonga eo amin’ny fitondrana, amin’ny anarany no ananan’ireo ny fahefana. Indray mandeha anefa ny safidy eo amin’ny elanelan’ny fitaom-pifidianana roa izay faritin’ny lalàna mba afahan’ireo nametrahana adidy anantateraka ampitoniana ny andraikitra ihantsorohany. Na izany aza tsy afaka itazana fotsiny ny mponina mandra mpiandry ny fehim-pitaona manaraka anaovana ny fifidianana.
Tsy mitaky fanakorotanana izany, ny fanaovana an’izany no efa nitondrana taketra tamin’ny fanongana-panjakana izay efa nozakaina nisesisesy ny fiamorana naterak’izany. Resy lahatra ny ankamaron’ny olona fa tsy izany no làlana izorana any amin’ny fandrosoana. Nefa kosa ve dia tsy maintsy iharitra itazana fotsiny arina an-tava, na ikipy mangina anara-diha raha andrariny ny fisin’ny ahiahy tandidin’ny fivarinan’an-kady.
Ny sehatra fanehona ny tsy fitovizan-kevitra fifandresen-dahatra dia ao amin’ny parlemanta, ao moa ny Antemieran-doholona izay vaolaza ho mpandridra be fahendrena ireo mpikambana ao aminy fa eo koa ny Antemierampirenena izay misy an’ireo solombambahoaka mpitondra teny ny mponina mikasika ny toe-draharaha izay mahamay ny vahoaka an-davan’andro. Tsy fomba fiteny fotsiny ilay filazana fa ny hevitrin’ny maro mataka-davitra. Lavitra hezaka ny tanjona eo amin’ny raharaham-pirenena, noho izany mila fanetren-tena ny tsirairay eo ampananterahana ny anjara andraikiny. Ny fiheverana fa ny tena irery ihany no mahafantatra ny tsara satria ny tena no eo amin’ilay toerana dia mety isarika any amin’ny làlana diso ary mety ampiditra mihitsy any amin’ny kizo. Marina fa ny tena no tompon’adidy, tompon’ny fanampahan-kevitra farany eo amin’ny sehatra misy an’ny tena, fa ny fanamby ataon’ny tena anie matetika dia ny maro no mizaka ny vokany. Ny fasahina mihevitra fa ny fahiratan’ny tena samy irery dia ampy. Maro anie izay nifandimby toerana teo amin’ny ambara-tonga maro mikasika ny fitondrana ny ranharam-pirenena, vitsy no tsy nisolafaka. Tonga kosa angamba ny fotoana tsy azo intsony anekena fadisona. Ao amin’ireo solombava no apetraka ny vesatra, mba andraisany ny adidy amin’na fampiredaredana ny hevitr’ireo vahoaka naniraka azy. Izy rehetra anie dia depioten’I Madagasikara izany hoe solombavan’ny vahoaka tsy vaky volo, ny tsirairay anefa dia irakin’ireo mpifidy isam-paritra.